IBotswana yethula Imali entsha yokuThuthukisa ezokuVakasha
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Ezintsha » Izindaba ZaseBotswana » IBotswana yethula Imali entsha yokuThuthukisa ezokuVakasha
Airlines • Izindaba Zezinhlangano • Izindaba ZaseBotswana • Ukukhishwa kwezindaba • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba
Kwangathi 3, 2017
ISouth African Airways yeluleke amakhasimende ayo ahambela eBotswana ukuthi uhulumeni wezwe wethula imali entsha yeTourism Development Levy. Imali entsha engu- $ US30 izosebenza kusuka ngoJuni 1, 2017 futhi izothinta bonke abavakashela eBotswana abavela e-Australia.
Inhloso echaziwe yale ntela ukuqoqa imali yokulondolozwa kanye nokuthuthukiswa kwezokuvakasha ezweni nokuxhasa ukukhula komkhakha wezokuvakasha eBotswana. Levy izokhokhwa kuwo wonke amachweba okungena kuwo kubandakanya nezikhumulo zezindiza kanye nezikhala zemingcele.
Kuzokhokhwa ngemishini yokukhokha ngogesi ngemali ($ USD) noma ngamakhadi asebhange asebhange. Ngemuva kokukhokha, kuzokwenziwa irisidi elihambisana nepasipoti yezivakashi ethulwa izikhulu zabokufika ezizobheka inkokhelo bese zigxivizwa ipasipoti. Irisidi isebenza izinsuku ezingama-30 futhi isebenza ngokufakiwe okuningi ezweni.
Ukuze uthole olunye ulwazi bheka botwanatourism.co.bw/tourismlevy
Ubucwebe obusha be-Luxury kanye ne-Watch Brand SABOTEUR Kwethulwa
Amaresiphi Amasha Wokubonga E-Thanksgiving Anongwe Ukusuka Okumhlophe...
IFrance ilungiselela izimvula ezine-asidi ezivela eCanary Islands ...